Hery - Tsiky dia ampy | Jiona 2014 |
(Misokatra ny fonon-teny) (tohiny)
2014-06-25 @ 19:16 in Fanatanjahan-tena
Vaovao farany: 26/06/2014. Voasazy tsy afaka milalao mandritra ny lalao 9 mifanesy andraisan'ny ekipa Uruguay anjara i Suarez. Tsy afaka hilalao amin'ity fiadiana ny tompon-daka eran-tany amin'ny baolina kitra ity intsony izany izy.
Tehiriziko ato fotsiny ity sary iray hafa hitako ity. Tsy vao voalohany i Suarez no nanaikitra, ary tsy vao voalohany no nanaikitra an'i Chiellini. Ary ny tena mahagaga dia tsy ahoan-tsy ahoana eo. Toa ny hoe olona entin-javatra handeha hanaikitra. Tandremo ihany mihaona amin'ny toa itony :-)
Fanarahan-dalÃ na ao Antananarivo
2014-06-19 @ 12:56 in Fiaraha-monina, Tsy aritra
Mafanafana fo indray ny ao Antananarivo renivohitra ao satria manomboka hentitra amin'ny fampiharana ny lalàna (efa nisy taloha na vao napetraka) ny ao am in'ny Kaominina. Nisesisesy mihitsy izy tato ho ato taorian'ny gaboraraky ny Tetezamita. Nanomboka tamin'ny fandrodànana trano, fandraràna fivarotana toaka amin'ny ora sasany, fandroahana ny mpivaro-tena tsy ampy taona, fanadiovana ny mpivarotra amoron-dalana, ny fanamboarana ny laharan'ny fiara sns. Mahafinaritra aloha ny mahita ny fanarahan-dalàna tahaka izao saingy misy tsetsatsetsa tsy aritra roa.
Fiantsoana any Madagasikara lasa lafo be?
2014-06-17 @ 08:42 in Fiaraha-monina, Tsy aritra
Teo alohaloha teo rehefa miantso an-taroby mandeha any Madagasikara dia ny skype no nampiasaiko na dia somary lafo noho ny tolotra sasany aza satria tamin'izany dia teo amin'ny 0,33 EUR eo ny 1 minitra. Fa tamin'ny fetin'ny reny teo dia niantso nampiasa skype indray dia akory ny hagagàna fa tapaka sahady ilay izy nefa tsy mbola niresaka firy akory. Niverina nijery ny tarif aho vao tonga saina fa nisondrotra avo telo heny ny saran'ny fiantsoana amin'ny skype any Madagasikara. Ary ny mahagaga dia tsy ny skype ihany no nisondrotra fa ireo mpifanandrina aminy hafa. Niezaka nijery ireo fampiasa hatr'izay ary aho ka dia ireto hozaraina aminareo ireto hoe iza no mora indrindra. Raha manana hafa moa dia ilazalazao. Alahatro avy amin'ny mora indrindra.
Ny Rebtel no hitako mora indrindra amin'izao fotoana izao satria dia 0,34 EUR /min no aloanao raha hiantso any Madagasikara. Ary raha mampiasa ity rohy ity ianao dia hahazo fihenam-bidy ary maimaim-poana ny antso voalohany http://reb.tl/1vyszmS.
Marihina fa misy application amin'ny finday koa io rebtel io.
Hoy ny Papa... une trÃ¨s belle coupe du monde
2014-06-12 @ 10:10 in Fanatanjahan-tena
Fantatra fa tia baolina kitra ny Papa (avy any Argentine rahateo izy). Koa navoakany tamin'ny Twitter-ny androany hoe "Je vous souhaite tous une très belle coupe du monde de football, jouée avec un esprit de vraie fraternité". Fantatro fa maro no tsy maintsy hikiredy sy himenomenona, indrindra moa fa ny rahalahy sasany... efa betsaka rahateo ireo manopa ao amin'io twitter io (jereo etsy ambany) saingy ny hafatra dia hoe aza ariana miaraka amin'ny rano avy nandroana ny zazakely. Marina tokoa fa maharikoriko ny fomba fanaon'ny FIFA sy ny kolikoly ao anatiny. Marina fa (tohiny)
LÃ oÃ¹ la politique a Ã©chouÃ©, la priÃ¨re doit rÃ©ussir
2014-06-11 @ 09:32 in Vaovao, Finoana sy Fivavahana
Tranga iray izay voalaza tamin'ny filazam-baovao maro tamin'iny faran'ny herinandro iny ny fihaonan'ny Papa Fransoà tamin'ny filohan'Israely Atoa. Shimon Peres sy ny filohan'i Palestina Mahmoud Abbas ary ny Patriarka Bartolomeo teto Vatikana. Fitohizan'ilay fanasana nataon'i Papa tamin'ny fandalovany tany Israely hoe "andao hiaraka hivavaka ho an'ny fandriam-pahalemana, atolotro ny tranoko any Vatican hanaovantsika izany fiaraha-mivavaka izany."
Tanteraka tokoa ilay fihaonana ary nanasa (tohiny)
Aoka kely indray aloha
2014-06-10 @ 14:40 in Manala azy
Efa mitady ho feno 5000 indray ny namana ao amin'ny FB koa mijanona kely indray aloha ny fampidirana namana. Afaka mifandefa hafatra foana ihany nefa na dia tsy namana aza. Marihina fa ny fampidirana namana maimaim-poana no mijanona fa raha misy moa terem-panahy hametraka kely dia azoko ampidirina ihany ka toa izao ny sarany:
Raha atao namana alavitra (subscription) : 25.000 AR
Raha atao namana tsotra mahita sary: 50.000 AR
Raha atao fianakaviana (mahita zavatra maromaro kokoa) : 100.000 AR
Raha atao izaho (euh) : mametraka commentaire eto ambany dia ifampidinihana.
Manan-kery mandritra ny 1 volana ihany ireo.
Ho hendry mandritra ny mondial :-)
2014-06-10 @ 11:22 in Fanatanjahan-tena
Rahafak'ampitso sisa dia hanomboka indray ny fifaninanana eran-tanin'ny baolina kitra. Dia be dia be ireo manao fampanantenana isan-karazany sy mivoadivoady mihitsy mba handresy ny ekipany. Efa betsaka eto Italia ireo tranom-barotra lehibe hoe hanome fihenam-bidy goavana raha mandresy ny Italiana. Fa ny tena nahalatsaka dia i Rocco Siffredi izay nivoady koa ny tsy hanao ny asany (izay efa fantatrareo) mandritra ny maha any Brazily ny ekipa italiana. Zaraiko ihany na dia tsy dia mifanentana loatra amin'ny kapoakako aza.
Raha ny fahitana ny fiaingan'ny ekipa italiana aloha dia vetivety ihany i Rocco no hiafy kanefa asa ho hita eo. Mety hanampy andry zareo angamba ny fahendren'i Rocco.
Izaho hatramin'izao mbola tsy maka ekipa fa mbola miandry ny fihodinana voalohany, mety hisy tampoka mantsy ny "surprise"
Ary iza tokoa hono no mety handresy hoy i Sr. Fabiola? :-)
Ny vodisobika sy ny tandrifiny
2014-06-09 @ 07:11 in Izaho sy ny ahy, Mozika
Nijery ity clip-n'i Syril sy Melky eto ambany ity aho dia mahatsiaro ilay lazain'ny Ntaolo hoe aza kivy fa ny vodisobika aza manan-tandrify... saingy aza misavi-tsaranga :-) Mahavariana tokoa ny mahita fa tena misy karazany ny olona, isaky ny faritra, isaky ny firenena, isaky ny firazanana, isaky ny fahefa-mividy. Ary samy mahazo ny anjarany daholo raha eo amin'ny fitiavana no resahina... satria samy manana ny anjara tsara ao aminy izay hitan'izay tia izany anjara izany. Ny olana matetika dia ny be fitetika tahaka andry Syril ka tsy afaka mamoaka ilay tena tsara ao aminy ho hitan'izay mety ho tandrify azy fa misavika ny tsy anjaran'ny tena. Tsy ratsy ny manandrana sao dia raikitra tampoka (mi-tanté sansa) fa tsy atao am-po mety hankarary satria manjary mitomany randrana manendrika ny hafa. Aleo avoaka araka izay tratra fotsiny ny kanto indrindra dia mionona amin'izay mankafy.
Fa na izany na tsy izany dia misaotra an'i Syril sy Melky namoaka tokoa ny fiainana an-davan'andron'ny olona.
Tsarà herinandro daholo.
Hihaino Hira Katolika amin'ny Android
2014-06-07 @ 11:43 in Dev
Tehiriziko ato amin'ny blaogy ihany na dia efa hitanareo mandehandeha any aza fa nivoaka omaly alina koa ny Hira Katolika amin'ny Android. Rindran-kajy hihainoana hira katolika malagasy amin'ny android. Tsy dia application be mankaiza fa nisy namana nangataka fotsiny hoe mba ataovy amin'ny telephone koa ilay Hira Henoina ao amin'ny katolika.org dia mba natao.
Fanamarihana mialoha: Mila internet io satria mavesatra be kosa raha ohatra ka atao ao anatin'ilay application avokoa ny hira katolika ananako :-)
Alaivo ao amin'ny Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=org.katolika.hira
Toa izao ny endriny:
Herinandro sisa! Hody alina indray?
2014-06-06 @ 08:04 in Izaho sy ny ahy, Fanatanjahan-tena
Resaka fampidirana tsy misy idirany mihitsy. Nitady lahatsoratra vitsivitsy momba ny mondial nosoratako tato amin'ny blaogy aho dia gaga fa hay tena nanoratra be tokoa aho taloha. Ary tamin'izany tsy voatery nasiana sary sy rindra fa izay tonga tao ambava sy tao antsaina ary tao am-po dia nosoratana. Tiako haverina indray izany fomba fanoratra eto amin'ny blaogy izany. Tamin'izany aho mantsy resy lahatra foana hoe valako ity aloha voalohany indrindra... dia izay tiako hosoratana ho ahy. Ny mpamaky manaraka ny onjany eo. Matetika ny mpanoratra blaogy mieritreritra be loatra ny mpamaky azy dia lasa mpanao gazety tsy fidiny :-). Nefa amiko dia fizaràna sy fifampizaràna aloha no atao. Mandray izay raisiny eny ihany ny mpamaky.
Fa izany eo ihany fa herinandro sisa dia baolina :-)
Toa ny lehilahy rehetra maro dia mba tia baolina koa aho. Any Brazily nefa ny fiadiana ny amboara eran-tany amin'ity taona ity. Izany hoe tsy mitovy ora amin'ny aty Eoropa sy Madagasikara. Nojerena ny fandaharana dia misy manomboka sasak'alina sy manomboka amin'ny 3 maraina, izany hoe tapitra amin'ny 5 maraina any ho any. Aleo apetraka mihitsy ho hita sy hotadidiana fa raha izao no mitohy dia haka congé :-)